Gudoomiyaha Gobalka Banaadir oo sheegay in ay Hir galieen Istiraatiijiyad Balaaran oo wax looga qabanayo Amaan Darida Muqdisho – Daily Som
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir oo sheegay in ay Hir galieen Istiraatiijiyad Balaaran oo wax looga qabanayo Amaan Darida Muqdisho
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir aghna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan eng yariisoow ayaa sheegay in uu maamulkiisa diyaariyya Istaaraatiijiyada Balaaran oo wax looga qabanayo Amaan drida ka jirta Magaalada.
Gudoomiye yariisoow ayaa tilmaamay in 17 degmo ee magaalada laga hirgalaiyay wadashaqayn joogta ah oo ay yeelanayaa laamaha Amaanka cidkastane ay ka qayb qaadanayso sugud Amanka.
yariisoow ayaa sheegay in qorshahaan Fulintiisa looga fadhiyo ciidamada Amaanka, waxa uuna tilmaamay in ay ka hortagaan falalka lidiga ku ah Nabad gal;yada dadwaynaha Somaaliyeed ee ku dhaqan Magaalada, iyaga oo isu kaashanaya si wada jir ah.
Gudoomiye yariisoow ayaa sheegay in ay masuuliyiijn badao oo ay ku jiraan asiga iyo Ra’isul wasaaraha booqdeen isla markaana kormeer iyo dhiira galinba usameeyeen Askarta loo diyaariyay Amaanka Caasimada isla markaana uu rajaynayo wax badan is badali doonaan.
“Caasimaddu si ay ula tartanto adduunka waxay u baahan tahay amni iyo xasillooni, amnigaas in ay keento waxa looga fadhinayana waa idinka hortayda taagan. Waxaana idiin-kaga mahadcelinayaa howllaha baxaadda leh ee aad ka qabateen amniga Muqdisho, welina waa inaad ogaataan cadowgu inuu dhibaato u maleegayo nafta iyo maalka shacabka Soomaaliyeed.” Ayuu yiri
Ugu danbaynGudoomiye Yariisoow ayaa askarta kula dardarmay in ay kor uqaadaan howlagada ka dhanka ah Nabad diidka si ay dadwaynaha Soomaaliyeed uhelaan Nabad Buuxda. “Waa in qof walba amni ku helaa gurigiisa kalsoonina ku noolaado, si aad taasi u suurtagelisaana anaguna waxaan nahay garbihiina”
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir oo sheegay in ay Hir galieen Istiraatiijiyad Balaaran oo wax looga qabanayo Amaan Darida Muqdisho added by Staff on May 8, 2018